ရန်ကုန်မြို့ကို နေချင့်စဖွယ်မြို့တော်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့ပြအမွေအနှစ်များကို ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်မြို့ကို နေချင့်စဖွယ်မြို့တော်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့ပြအမွေအနှစ်များကို ?
ရန် ကုန်မြို့ကို စိမ်းလန်းစိုပြည်ပြီး နေချင့်စဖွယ် စီးပွားရေး မြို့တော်ကြီး ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့ပြ အမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောကြားသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် စ ထရင်းဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (YHT) မှ ပြုလုပ်သော စထရင်းဟိုတယ်တွင် ၂၇ ခုမြောက် အပြာရောင် ကမ္ပည်းပြားတပ်ဆပ်ပွဲ အခမ်း အနားတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြို့ပြအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းခြင်းအပြင် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် မပျက်စီးအောင်လည်း သတိ ပြု ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။ ”ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ထဲမှာ မြို့ပြအမွေအနှစ်တွေ ထိန်း သိမ်းရေး၊ အစိမ်းရောင်မြို့ဖြစ်ရေး၊ တစ်ဖက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမွေအနှစ်တွေက နေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍနယ်ပယ်တွေကို မြှင့် တင်ဆောင်ရွက်ပြီး နေချင့်စဖွယ် စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီး ဖြစ်လာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန် မြို့ကို စတင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်တဲ့ကာလမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့သ ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုမပျက် စီးသွားစေဖို့လည်း ကျွန်တော်တို့ သတိပြုနေပါတယ်”ဟု ¤င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်း ရေးသည်အရေးကြီးသောကြောင့် မြို့ပြအမွေအနှစ်အဖြစ် အသိ အ မှတ်ပြုသော အပြာရောင် ကမ္ပည်း ပြားများ တပ်ဆင်ခြင်း အခမ်းအ နားများကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အနေဖြင့် တက်ရောက်အားပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် အပြာရောင် ကမ္ပည်းပြားများ တပ်ဆင်ခြင်းအား ဖြင့် ရှေးဟောင်းမြို့ပြအမွေအနှစ် များကို မပျက်စီးအောင်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်နိုင်မည့် အကျိုးရရှိ နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ်းနားလမ်းရှိ စထရင်းဟိုတယ်သည် ၁၉ဝ၁ ခု နှစ်ကတည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် အဆောက်အအုံ၏ သက်တမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ပြီဖြစ်သော ရှေးဟောင်း မြို့ပြအမွေအနှစ်အ ဆောက်အအုံ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
YHT ၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်သော ဒေါ်မိုးမိုးလွင်ကလည်း ”စထရင်းဟိုတယ်ဆိုတာ ရန်ကုန် မြို့မှာ အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ပါဝင် တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ တပ်ဆင်တဲ့ စထရင်းဟိုတယ်က တော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲ ကတစ်ခု။ ရန်ကုန်မြို့ဖြစ်လာတာ နဲ့အမျှ အစောဆုံးအအောင်မြင် ဆုံး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းပေါ့။ အသိ အမှတ်ပြုပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့ အ နေနဲ့ အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားတပ် ဆင်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
စထရင်းဟိုတယ်သည် မြို့ပြ အမွေအနှစ်အဖြစ် ပထမဦးဆုံး အပြာရောင်ကမ္ပည်းပြားတပ်ဆင် လိုက်သည့် ဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းကဲ့သို့ အပြာရောင် ကမ္ပည်း ပြား တပ်ဆင်၍ အသိ အမှတ်ပြု ခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဖြစ်သလို ခရီးသွားများလည်း ဟိုတယ်ကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ငွေစက္ကူအတုမှန်း မသိကြောင်း ခိုင်မာ အထောက်အထားရှိလျှင် အရေးယူခြင်း မရှိဟုဆို
အဝေးဂိုးရခဲ့ခြင်းကို အသာစီးရယူရန် နာဗက်စ် တိုက်တွန်း
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်း၌ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်၊ ခုနစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
‘ကလေးအမေ ကာရိုက်တာက ကိုယ့်အတွက် သရုပ်ဆောင်ရတာ အရမ်းစိန်ခေါ်မှု များပါတယ်’ သရုပ်ဆောင် မေဆူးမေ??